Ubusuku bubuthambile ... kwiminyaka engama-196 emva kokubhubha kukaJohn Keats | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | I-Biography, Ababhali, Imibongo
UJohn Keats (eLondon, 1795-iRoma, ngo-1821)
John Keats yenye yeembongi ezibalulekileyo ze Inkulungwane ye-XNUMX yesiNgesi yothando, kodwa ukusukela ngelo xesha kwihlabathi liphela. Namhlanje ziyazaliseka 196 iminyaka ukufa kwakhe eRoma. ndibene 25 iminyaka kwaye, njengembongi elungileyo yothando kunye nomphefumlo obuthathaka kakhulu, wagula wasweleka isifo sofuba, njengaphambi komntakwabo nonina.
Njengazo zonke iimbongi nababhali baseBritane, ndiyifunde kwikhondo lam lobomi kwaye, nangona imibongo ingeyonto yam, ubuntununtunu bunjalo. Kwaye i iivesi Iikethi zikhulu kakhulu Ulwimi oluhle, oludlamkileyo nolucingayo kunye nolulawulwa yimelancholy. Ngamanye amagama, ngumfanekiso ogqibeleleyo waleya yayiqulathe umoya wakhe. Ukusuka kwisangqa esinye sexesha, yena, uPercy Bysshe Shelley kunye neNkosi Byron kunokwenzeka ukuba nguBathathu Emnye oyiNgcwele yeembongi ezinkulu zothando zaseBritane.
Olunye lwebhayiloji yakhe
UJohn Keats wazalelwa ngaphandle kwe Londres kwaye, esemncinci kakhulu, wayeyinkedama kuyise. Unina waphinda watshata, kodwa akuzange kuhambe kakuhle kwaye wamshiya umyeni wakhe. Baye bahlala nomakhulu kaKeats e-Enfield. Nini Umama wakhe wasweleka, umakhulu wamisela abagcini ababini abagcina iinkedama. Aba bathathe uKeats esikolweni sakhe bamguqula baba yiyo Ugqirha oqeqeshelwa umsebenzi. Kodwa wazinikela ngakumbi kuncwadi. Ndaphumelela IFama, kodwa wasebenza iminyaka emibini kuphela ngaphambi kokuba azinikele ngokupheleleyo kwimibongo.
La impembelelo enkulu ukuba wayenayo yayingumsebenzi wembongi yenkulungwane ye-XNUMX Ispenser sikaEdmund, owaphefumlela umbongo wakhe wokuqala: Ukuxelisa iSpenser. Ngokukhawuleza wangena kwisangqa esikhethiweyo seembongi ezibalaseleyo zexesha lakhe, njengoShelley noLord Byron.
En 1817 wapapasha ingqokelela yakhe yokuqala yemibongo enesihloko ngokulula Imibongo, que ayizange yamkelwe kakuhle. Kwenzeka into efanayo nange endymion, umbongo wakhe oyindumasi. Embindini waphulukana nomnye umzalwana, eyamchaphazela kakhulu. Ugqibe kwelokuba afudukele eLondon, kwikhaya lomhlobo wakhe awayehambe naye eScotland nase-Ireland. Kodwa naye, wayesele ebonakalisile iimpawu zesi sifo.
Kwaye kulapho wadibana khona UFanny brawne, awayethandana naye kakhulu. Nguye owakhuthaza uninzi lwemibongo yakhe, ngakumbi uthotho lwee odes. Yathi yakuba mandundu impilo yakhe, wagqiba kwelokuba afumane imozulu engayiphucula kwaye aye eNaples. Kodwa wasweleka kwiinyanga ezimbalwa kamva eRoma. Ingcwaba lakhe yile epitaph intle: "Nanko umntu olele igama lakhe labhalwa emanzini".
Nguye mncinci yothando olukhulu lwaseBritane, kodwa enye yazo amazwi abaluleke kakhulu ngolwimi lwesiNgesi. Kuyinyani oko Khange alufumane ulwamkelo olumfaneleyo ebomini, kodwa walufumana kamva. Kwaye ke umsebenzi wakhe uthathwa njengomkhulu ntumbuluko ecacileyo. Ndijonge ukufikelela kwi ubuhle obupheleleyo kwaye ngokungathandabuzekiyo uninzi lweendinyana zakhe lunalo. Njengaleyo ye Kuthambile ubusuku, ibandakanyiwe kweyona ode yakhe yaziwayo, Ode ukuya kwi-nightingale.
Kodwa imibongo iyathanda Intombazana entle engenanceba, Ukuwa kweHyperion o Ngaphezulu kolwandle. Ndihlala ndihlala nale nto Yiba nemfesane, inceba, uthando! Kodwa fumana ezinye. Ngapha koko, yeyiphi incopho engcono yale nyanga yothando kaFebruwari ephelayo.
Yiba nemfesane, inceba, uthando! Thanda inceba!
Uthando oluthandekayo olungasenzi ukuba sibandezeleke ngaphandle kokuphela,
uthando lwengcinga enye, ukuze ungangxoli,
Ucocekile, awunazimaski, ungenabala.
Ndivumele ukuba uphelele… Yiba yinto yonke, konke okwam!
Obo bume, olo lubabalo, olo lonwabo lincinci
uthando olukuncamisa kwakho ... ezo zandla, loo mehlo kaThixo
esifudumeleyo, esimhlophe, esikhanyayo, esifubeni esimnandi,
ngokwakho, umphefumlo wakho ngenceba undinike yonke into,
ungagcini i-athomu okanye ndiza kufa,
Okanye ukuba ndiyaqhubeka ndiphila, likhoboka lakho elidelekileyo
Ulibale, kwinkungu yenkxwaleko engenamsebenzi,
iinjongo zobomi, incasa yengqondo yam
ukulahleka kukungakhathali, kunye namabhongo am angaboniyo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Ubusuku bubuthambile… kwiminyaka engama-196 emva kokubhubha kukaJohn Keats